Love O2O ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Myanmar Asian TV Channel
By Myanmar Asian TV Channel October 03, 2016
ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိသွားစေတဲ့အရာဟာ ဘာပါလဲ?
အလှတရားကြောင့်လား ? ငွေကြေးကြွယ်ဝမှုကြောင့်လား ?
ဒီဇာတ်လမ်းကကောင်လေးအတွက်တော့ တစ်ခုမှမဟုတ်ပါဘူး ...
ရှောင်းနိုင့်လို့ခေါ်တဲ့ ချင်တက္ကသိုလ်က ကောင်လေး ချောချောလေးက ...
ပေဝေဝေလို့ခေါ်တဲ့ ကောင်မလေးကိုမြင်မြင်ခြင်းကြွေသွားရတဲ့အကြောင်းအရင်းက ...
ဝေဝေရဲ့အလှကြောင့်မဟုတ်ပဲ...Game တစ်ခုကို battle ဆိုင်နေတဲ့အချိန် ...
Computer Keyboard ပေါ်မှာပြေးလွှားနေတဲ့ ...ဝေဝေ့ရဲ့လက်ချောင်းသွယ်သွယ်လေးတွေကြောင့်ပါပဲ...
( မှတ်ထားကြနော် ကောင်လေးချောချောလေးတွေက
လက်ချောင်းသွယ်သွယ်လေးတွေကို ကြိုက်တယ်ဆိုတာကို )
ပေဝေဝေ လို့ခေါ်တဲ့ ချင်တက္ကသိုလ်က Computer Science မေဂျာရဲ့ Queenလေးက
Online game ဆော့တာလည်း အရမ်းတော်တဲ့ကောင်မလေးပါ
သူတို့ကျောင်းက အရမ်းချောပြီး မိန်းကလေးတိုင်း ကြွေရတဲ့ သူတို့မေဂျာကစီနီယာ ရှောင်းနိုင့် က
အင်တာနက် cafe မှာဂိမ်းbattle ဆိုင်နေတဲ့ ဝေဝေ့ကို အမှတ်မထင်တွေ့ပြီးကြွေသွားပါတယ်
အဲ့အခါမှာ ဝေဝေ့နဲ့နီးအောင်လို့game ထဲကနေ ကြိုးစားချဉ်းကပ်ပါတော့တယ်
ရှောင်းနိုင့်ကလည်း ဝေဝေတို့ရဲ့Server က Top 1 player တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်
အပြင်မှာမြင်မြင်ချင်းကြွေသွားခဲ့တဲ့အတွက် Game ထဲမှာ လက်ထပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး
တကယ့်အပြင်မှာရော ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြမှာလား???? ဆိုတာ
Main Cast အနေနဲ့ကတော့ မင်းသားချောလေး Yang Yang က
Main Actor ရှောင်းနိုင့် အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ...
မင်းသမီးချောလေး Zheng Shuang ကတော့
Main Actress ပေဝေဝေ နေရာက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ...
ပုံမှန် Drama တွေနဲ့ မတူတဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့
ဒီကားက Game တစ်ခုကို အခြေခံတယ်လို့လဲ ပြောလို့ရပါတယ် ...
မင်းသား မင်းသမီး တွေ game ဆော့ပြီဆိုတာနဲ့
သူတို့တွေက game ထဲက ဇာတ်ကောင်ပုံစံ game ကို အသားပေးပြန်ပြပါတယ် ...
Costumes အလန်းစားကြီးတွေကိုလဲ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ...
ကဲ အားလုံးခံစားကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ...
Translator - Pandora Nova, Amy
Encoder - LoL , Khin Chan Myae Htun , LK ( From Channel Myanmar )
MyanmarAsianTV Channel မှ တင်ဆက်သည် ။ ။ ။
Episode 1 ( Mediafire Link )
Episode 1 ( pcloud Link )
Episode 1 ( V.I.P Link )
Episode2( pcloud Link )
Episode2( V.I.P Link )
Episode3( pcloud Link )
Episode3( V.I.P Link )
Episode4( pcloud Link )
Episode4( V.I.P Link )
Episode5( pcloud Link )
Episode5( V.I.P Link )
Episode6( pcloud Link )
Episode6( V.I.P Link )
Episode7( pcloud Link )
Episode7( V.I.P Link )
Episode 8 ( pcloud Link )
Episode 8 ( V.I.P Link )
Episode9( pcloud Link )
Episode9( V.I.P Link )
Episode 10 ( pcloud Link )
Episode 10 ( V.I.P Link )
Episode 11 ( pcloud Link )
Episode 11 ( V.I.P Link )
Episode 12 ( pcloud Link )
Episdoe 12 ( V.I.P Link )
Episode 13 ( pcloud Link )
Episode 13 ( V.I.P Link )
Episode 14 ( pcloud Link )
Episode 14 ( V.I.P Link )
Episode 15 ( pcloud Link )
Episode 15 ( V.I.P Link )
Episode 16 ( pcloud Link )
Episode 16 ( V.I.P Link )
Episode 17 ( pcloud Link )
Episode 17 ( V.I.P Link )
Episode 18 ( pcloud Link )
Episode 18 ( V.I.P Link )
Episode 19 ( pcloud Link )
Episode 19 ( V.I.P Link )
Episode 20 ( pcloud Link )
Episode 20 ( V.I.P Link )
Episode 21(pcloud Link)
Episode 21(V.I.P Link)
Episode 22 ( pcloud Link )
Episode 23 ( V.I.P Link )
Episode 23 ( pcloud Link )
Episode 24 ( V.I.P Link )
Episode 24 ( pcloud Link )
Episode 25 ( V.I.P Link )
Episode 25 ( pcloud Link )
Episode 26 ( V.I.P Link )
Episode 26 ( pcloud Link )
Episode 27 ( Openload Link )
Episode 27 ( pcloud Link )
Episode 28 ( Openload Link )
Episode 28 ( pcloud Link )
Episode 29 ( Openload Link )
Episode 29 ( pcloud Link )
Episode 30 (Final) Open Load Link
Episode 30 (Final) pcloud link
China Comedy Drama Romance
Labels: China Comedy Drama Romance
Hnin Thaw October 4, 2016 at 2:57 AM
i likes this china drama
i likes this china drama thank
Gant Gaw Oo October 6, 2016 at 2:01 AM
Scarlet Heart October 6, 2016 at 7:10 AM
ထပ်တင်ပေးပါအုံး admin ကြည့်ချင်လို့ပါ Please Admin!!!!
dksodayts October 11, 2016 at 9:01 AM
ထပ်တင်ပေးပါအုံး ကြည့်ချင်လို့ပါ please ADMIN
Scarlet Heart October 12, 2016 at 10:47 AM
အခုလေးတင် episode4VIP link ကနေ down တာ မရဘူး admin Link ပြန်လုပ်ပေးပါ Please
dksodayts October 25, 2016 at 7:21 AM
Enter tainment October 30, 2016 at 12:43 AM
thanh you for ep 12
Unknown October 31, 2016 at 4:47 AM
mayyu mgmg November 7, 2016 at 5:12 AM
Mee Mee November 10, 2016 at 5:26 AM
အပိုင်းအစအဆုံး​လေး မြန်​မြန်​တင်​​ပေးပါ မ​စောင့်​နိုင်​လို့ တစ်​ပိုင်းတစ်​ပိုင်းကို Please Admin
shining star November 14, 2016 at 12:33 AM
Plz up ep 15,16
shining star November 14, 2016 at 7:30 AM
Hay Wathan December 3, 2016 at 2:04 PM
နေ ဖြိုးကျော် December 5, 2016 at 2:47 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ... ကျွန်တော် အပိုင်း15 နဲ့ ရပ်နေတာ.. အခုလို တင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။..
wai yan January 10, 2017 at 1:30 AM
အဆင်ပြေရင် ဆက်တင်ပေးပါဦး Plz ep25,26,.....
Enter tainment January 13, 2017 at 8:28 AM
မတင်တော့ဘူးလား ရှင်းရှင်းပဲမေမယ်ဗျာ အကြောင်းလဲ မပြန် စောင့်ရတဲ့သူလဲမောလှပြီ
Chaw Haymann Hnin January 21, 2017 at 6:27 AM
ထပ်တင်ပေးပါဦး O2O လေး တန်းလန်းကြီးဖြစ်နေပြီ
Closest Love to Heaven ( 2017 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel September 21, 2017
Original Title - Kyô no Kira kun
ဒီဇာတ်ကားလေးက 2017 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Japanese Romance , School ဇာတ်လမ်းလေးပါ ...
Rin Mikimoto ရေးသားခဲ့တဲ့ “ Kyo no Kira kun “ လို့ အမည်ရတဲ့ Manga Series ကို ပြန်လည် အသက်သွင်းထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ ...
အိုကာမူရာ-နိနိုး ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး က တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အရမ်းချစ်တတ်သူ တစ်ဦးပေါ့ ... အထက်တန်းကျောင်း တက်နေတဲ့ ကျောင်းသူလေး တစ်ဦးလဲ ဖြစ်တာပေါ့ ... အပေါင်းအသင်း လဲ မရှိပဲ အနေ အေးဆေးသူ တစ်ယောက်ပေါ့ ... ဒါ့ကြောင့် တခြားသူတွေရဲ့ အနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုလဲ ခဏ ခဏ ခံရသူပါ ...
ယုအိဂျိ-ခိရ ဆိုတဲ့ ကောင်လေး ကတော့ အထက်တန်းကျောင်းရဲ့ ပေါ်ပြူလာ အဖြစ်ဆုံး ကောင်လေးပေါ့ ... ဘဝ ကို ပျော်ပျော်နေတယ် ... အပေါင်းအသင်းနဲ့ ရီရီမောမောနေတယ် ... မိန်းကလေး ပေါင်းစုံနဲ့ တွဲတယ် ... ဒါပေမဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်း နဲ့ ပွေလီခြင်း ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ လျှို့ဝှက်ချက် အကြီးကြီး တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းထားရသူ တစ်ဦးပေါ့ ...
ကံကြမ္မာရဲ့ စေခိုင်းမှုကြောင့် ခိရ ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် ကို နိနိုး တစ်ယောက် သိရှိလာပြီးတော့ အချိန်မှာတော့ , အရာရာဟာ ပြောင်းလဲလို့ သွားခဲ့ပါတယ် ....
I AM ( 2017 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel September 28, 2017
သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ သားသမီးနှစ်ယောက်ကို စွန့်ပစ်ပြီးတော့ သူ့လေ့လာစမ်းသပ်ချက် အောင်မြင်ဖို့ကိုပဲ အဓိကထားခဲ့တယ် ...
သူဖန်တီးထားတဲ့ စက်ရုပ်လေးက လူသားတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေထက် သာလွန်တဲ့ အရည်အချင်းမျိုးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ... မိန်းကလေးစက်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ " AD No.1 " ပါ ...
တစ်နေ့တော့.. သိပ္ပံပညာရှင်က.. စက်ရုပ်ကို.. သူ့သားသမီးအိမ်မှာ အပ်ထားခဲ့တယ် ...
အဲ့စက်ရုပ်မလေးက အန်နီ နာမည်နဲ့ အထက်တန်းကျောင်း တတ်ရောက်တဲ့အခါ ...
အန်နီလေးက သူ့အတွက် ထူးဆန်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာ နေသားကျပါ့မလား ..?
သာမာန်လူသားတွေလို စိတ်ခံစားချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါ့မလား ..? ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
အပိုင်းတို ၆ ပိုင်းသာ ရှိပြီး 2017 မှာထွက်ရှိထားတဲ့ web Drama series လေး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ...
Translator : Elvis
Encoder : Anonymous X
Quality : 540p
Episode 1 ( Openload Link )
Episode2( Openload Link )
Episode3( Openload Link )
Episode4( Openload Link )
Episode5( Openload Link )
Episode 6.END ( Openload Link )
Mr. Pride Vs Miss Prejudice ( 2017 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel September 19, 2017
ဒီတရုတ်ကားလေးက 2017 Aprilလောက်မှာ ထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီး Romance & Comedy movie လေးတစ်ခုပါ ...
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ကျူးဟုန် ဟာချမ်းသာတဲ့သူဌေးသားလေးဖြစ်ပြီး ... သူ့ချစ်သူကောင်မလေး မိုမိုကို propose လုပ်ဖို့ပြင်ထားတဲ့ပွဲမှာ ... လူမှားပြီး ထျောင်နန်နန် ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကို မှားယွင်းပြီး
propose လုပ်မိတဲ့အခါမှာတော့ ... ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ...?
ကျူးဟုန် ကရော မိုမို နဲ့ အဆင်ပြန်ပြေသွားလား ...?
ထျောင်နန်နန် ကရော ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ ...?
ပြီးတော့ကျူးဟုန်ရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ရှောင်ကျန့်ကျွင်း ကလည်း ထျောင်နန်နန် ဆိုတဲ့ online game ရေးတဲ့စာရေးဆရာမလေးကို စတင်စိတ်ဝင်စားမိတဲ့အခါမှာတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ...?
ထျောင်နန်နန်ရဲ့ဖူးစာရှင်အစစ်ကဘယ်သူလဲ ...? ဆိုတာဒီကားလေးမှဲာကြည့်ရူကြပါလို့
Maincast တွေအနေနှင့်ကတော့ -
ထျောင်နန်နန် အဖြစ် Dilraba Dilmurat ( The King's Woman )
ကျူးဟုန် အဖြစ် Leon Zhang
ရှောင်ကျန့်ကျွင်း အဖြစ် Vengo Gao
Translated by Sandar Lwin
Encoded by Anonymous X
Size - 769 MB
Hyde, Jekyll, and I ( 2015 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel September 27, 2017
ဒီကားလေးကကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေလည်းကြည့်ပြီးလောက်မှာပါ ... 5-Series မှာ "ချစ်သူကိုယ်ပွားလေး" ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လွှင့်ခဲ့ဖူးပါတယ် ...
နတ်သမီးတံတားမှာ ညတိုင်း ဆောဂျင်း ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရောက်ရောက်လာပြီးခုန်ချဖို့လုပ်ပါတယ် ... ဒါပေမယ့်လည်းအခေါက်တိုင်းခုန်မချဖြစ်ပဲပြန်သွားတယ် ... အဲဒါကိုဟာနာဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာ ကျွမ်းဘားလေ့ကျင့်ရင်းစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ် ... တစ်နေ့မှာရေထဲကိုတကယ်ခုန်ချလိုက်တဲ့ ဆောဂျင်းကိုကယ်ရင်းနဲ့ဟာနာဟာ ရေထဲပြုတ်ကျသွားတယ် ... အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဟာနာ့ကို ကယ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုယ်သူတောင်မသိလိုက်ဘဲ ဆောဂျင်းရဲ့ကိုယ်ထဲကမသိစိတ်ဟာ ဆောဂျင်းကိုယ်ပွား ရိုဘင် အဖြစ် ပြောင်းလဲထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ် ...
အတ္တ၊မာနတွေနဲ့သူများကိုလုံးဝစာနာမသနားတတ်တဲ့ ဆောဂျင်း ....
သနား၊ကြင်နာတတ်ပြီးတခြားသူတွေကိုကယ်တင်တတ်တဲ့ ရိုဘင် ...
ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီးသူများကိုကူညီတတ်တဲ့ ဟာနာ ...
သူတို့သုံးယောက်ရဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်းမှာ ဟာနာ့ရဲ့အချစ်ကိုဘယ်သူရသွားမလဲ ?
Fifteen Years of Waiting for Migratory Birds ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel May 12, 2017
ဒီနေ့ Ongoing တွေ နားတဲ့ နေ့လေးမှာ Viki မှာ 9.3/10 နှင့် MyDramaList မှာ 7.8/10 ရရှိထားတဲ့ rating မြင့် Chinese Series လေး တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ...
Main Actor အဖြစ် Zhang Ruo Yun ( Novoland ဇာတ်ကားထဲက ဖုန်းထင်းရီ ) က ပါဝင်ထားပြီး ...
Main Actress အဖြစ် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မင်းသမီးလေး Sun Yi က ပါဝင်ထားပါတယ် ...
ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ဘဝ ကို အခြေခံ ရိုက်ကူးထားပြီး Friendship , Life , Mature & Romance ဇာတ်လမ်း ပုံစံလေးပါ ...
ဒီDramaလေးက ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် လူငယ်လေးတွေရဲ့ အပြုအမူ သဘာဝ ကိုပုံဖော်ထားတဲ့ ဟာသဇာတ်မြူးတစ်ပုဒ်ပါ ... မိသားစုကြားပြဿနာ , သူငယ်ချင်းကြားက ပြဿနာ စတဲ့ ရသမျိုးစုံကို ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားတာပါ ...
လီလီ့ရဲ့အဖေကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာလီလီ့ အမေဟာ နောက်ထပ်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပါတယ် ... အဲ့ဒီအိမ်ထောင်မှာ လီလီ့ ထက် အသက်ကြီးတဲ့ ကွန်းရန် ဆိုတဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ခက်တဲ့ကောင်လေးပါလာတယ် ... အဲ့ကာင်လေးနဲ့လီလီဟာ အမြဲ မတည့်အတူနေရသူတွေပေါ့ ...
ဒါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းအစမှာပါတဲ့ မင်္ဂလာပွဲက လီလီနဲ့ကွန်းရန်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲပါ ... ပိုင်ရှောင်ရွှီနဲ့မဟုတ်ပါဘူး ... ဘာတြွေ…